Ohatra 6 amin'ny fitaovana ara-barotra mampiasa Artificial Intelligence (AI) | Martech Zone
Fahaizana artifisialy (AI) dia lasa iray amin'ireo teny filamatra ara-barotra malaza indrindra. Ary noho ny antony marim-pototra - AI dia afaka manampy antsika hanao automatique ny asa miverimberina, hanamboatra ny ezaka ara-barotra, ary handray fanapahan-kevitra tsara kokoa, haingana kokoa!
Raha ny momba ny fampitomboana ny fahitana marika dia azo ampiasaina amin'ny asa maro samihafa ny AI, ao anatin'izany ny marketing influencer, ny famoronana votoaty, ny fitantanana ny media sosialy, ny famoronana fitarihana, ny SEO, ny fanovana sary, ary ny maro hafa.
Eto ambany dia hojerentsika ny sasany amin'ireo fitaovana AI tsara indrindra ho an'ny mpivarotra izay afaka manatsara ny fiovam-po amin'ny fampielezan-kevitra, mampitombo ny fahombiazany ary manatsara ny fahitana ny tranokala:
Natosiky ny AI Influencer Marketing
IMAI dia sehatra ara-barotra influencer entin'ny AI izay ahafahantsika mahita ireo influencer mety amin'ny marika iray, manara-maso ny zava-bitany ary mandrefy ny ROI. Ny singa fototra ao amin'ny IMAI dia ny fitaovam-pikarohana AI influencer mahery vaika izay afaka mikaroka sy manangona angon-drakitra momba ireo mpikatroka niche indrindra ao amin'ny Instagram, Youtube ary TikTok.
AI dia manome fotoana ho an'ny marika hitadiavana sy hikendry ny ankamaroan'ny mpikatroka niche ao anatin'ny indostriany. Ny fahaizan'ny AI mahita haingana ny influencers dia ahafahan'ny IMAI manana iray amin'ireo angona matanjaka indrindra.
Amra Beganovich, Tale Jeneralin'ny masoivoho ara-barotra nomerika Amra & Elma
Ohatra, ny mpanamboatra fiara izay te-hahita mpikatroka fiara liana amin'ny fiara ara-panatanjahantena dia afaka mahita masoivoho marika mety hampiasa AI tsy mila mikaroka azy ireo amin'ny media sosialy. Ity fahaiza-mizarazara amin'ny talenta izay mifanandrify indrindra amin'ny demografika kendrena amin'ny marika iray dia manampy amin'ny fampitomboana ny fiovam-po amin'ny mpitaona ary hampitombo ny ROI amin'ny fampielezan-kevitra.
Mahazoa Demo IMAI
Natosiky ny AI Content Creation
Quillbot dia mpanampy fanoratana mampiasa AI izay afaka manampy amin'ny famoronana votoaty tsara kokoa, haingana kokoa. Mampiasa fanodinana fiteny voajanahary (NLP) hamakafaka lahatsoratra ary manolotra soso-kevitra momba ny fanatsarana ny soratra iray. Ohatra, i Quillbot dia afaka manolotra teny na andian-teny hafa, manolotra teny mitovy hevitra, na manome toro-hevitra momba ny fitsipi-pitenenana mihitsy aza.
Ny fampiasana AI mba hanampiana amin'ny famoronana votoaty dia ahafahantsika manatsara ny fahaiza-manao ara-barotra sy ny mombamomba ny tranokalantsika sy ny votoatin'ny media sosialy. Ohatra, ny AI dia mamela antsika hampitombo ny fangatahan'ny pejy fipetrahana na lahatsoratra bilaogy amin'ny alàlan'ny fanolorana soso-kevitra momba ny teny na fomba fiteny izay mety ho toy ny monotone sy mankaleo loatra.
Eliza Medley, mpitantana votoaty ho an'ny Hostinger
Quillbot dia manana endri-javatra maromaro afaka manampy ao anatin'izany ny torolàlana momba ny fomba, ny fisavana plagiarism ary ny isa azo vakiana. Ny AI dia afaka manome tari-dalana amin'ny famerenana lahatsoratra na fehezanteny ary mahatonga azy ireo ho mahaliana kokoa.
Natosiky ny AI Social Media Management
MeetEdgar dia fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy ampiasain'ny AI izay manampy amin'ny famoahana ho azy amin'ny haino aman-jery sosialy. Mamela antsika hamorona siny votoaty mifototra amin'ny lohahevitra, tenifototra, na tenifototra mihitsy aza. Ny lozisialy dia mameno ireo siny ireo amin'ny votoaty avy amin'ny loharano isan-karazany, ao anatin'izany ny fahana RSS, bilaogy ary lahatsoratra.
Ny fijanonana eo ambonin'ny fironana dia manome fahafahana ny marika hamorona votoaty manan-danja ho an'ny mpihaino azy. Amin'ny fampiasana AI hanangonana angon-drakitra mifandraika amin'ny indostria farany indrindra, dia afaka manatsara ny paikadin'ny media sosialy izahay mba hifandraisana tsara amin'ny mpihaino.
MeetEdgar dia ahafahantsika mandamina mialoha ny lahatsoratsika, ary miantoka fa ny atiny dia apetraka amin'ny fotoana tsara indrindra handraisana anjara. Ohatra, raha manana lahatsoratra bilaogy izay tiantsika hozaraina amin'ny media sosialy isika, ny MeetEdgar dia hamela antsika hanatsara azy voalohany indrindra ho an'ny vaovao mahaliana indrindra sy vao haingana momba ny indostria, ary avy eo dia hizara ilay lahatsoratra amin'ny fotoana manokana mifototra amin'ny asan'ny mpihaino. lamina.
Andramo maimaim-poana i Edgar
Natosiky ny AI Lead Generation
LeadiQ dia fitaovana famokarana fitarihana avy amin'ny AI izay manampy antsika hahita sy hahafeno fepetra, haingana kokoa.
LeadiQ dia mampiasa loharano angon-drakitra maromaro hitadiavana fitarihana, ao anatin'izany ny media sosialy, ny biraon'ny asa ary ny lahatahiry momba ny fandraharahana. Raha vao nahita fitarihana ny LeadIQ, dia hampiasa NLP hamakafaka ny fisian'ny mpitarika amin'ny Internet izy ary hamaritra ny fitarihana mifototra amin'ny mety ho liana amin'ny vokatra na serivisintsika.
Ny fampiasana AI ho an'ny automatique ny ezaka fampandrosoana orinasa dia manome fahafahana hanamafisana bebe kokoa ny kalitaon'ny fifandraisana eo amin'ny marika sy ny mpanjifa. Izy io dia manome fahafahana hifantoka bebe kokoa amin'ny lafiny maha-olombelona amin'ireo fifandraisana ireo amin'ny alàlan'ny fitsitsiana ny fotoana amin'ny boky torolalana ary indraindray tena sarotra ny fitadiavana mpanjifa.
Berina Karic, mpitantana ara-barotra ao amin'ny Masoivoho momba ny marketing influencer ambony
Ny LeadiQ dia azo ampiasaina hananganana fanentanana fikolokoloana fitarihana mandeha ho azy, mba hahafahantsika manohy mifandray amin'ireo mpitarika antsika na dia tsy vonona hividy avy hatrany aza izy ireo. Ohatra, afaka manangana ny rindrankajy izahay handefasana mailaka maromaro amin'ny fitarihana rehefa mandeha ny fotoana, na hiantso azy ireo mihitsy aza raha tsy namaly ny mailakao izy ireo.
Atombohy amin'ny LeadiQ maimaimpoana
Fanamafisana ny motera fikarohana entin'ny AI
Moz Pro dia Search Engine Optimization mampiasa AI (SEO) fitaovana manampy amin'ny fanatsarana ny laharan'ny tranokala amin'ny milina fikarohana.
Moz Pro dia mampiasa loharano angon-drakitra isan-karazany hamakafaka tranokala iray ary manolotra soso-kevitra momba ny fanatsarana ny SEO marika.
Moz dia mamela antsika hiditra amin'ny teny sarotra ambany, ary hahita teny fanalahidy manokana izay mety hodian'ny mpifaninana. Izany dia manome fahafahana hamolavola paikady ara-barotra votoaty izay mifototra amin'ny fomba famakafakana fa tsy maminavina, izany hoe mamorona lahatsoratra na pejy fipetrahana izay raha ny teoria dia toa tsara nefa mety tsy mahazo fifamoivoizana.
Moz Pro dia manampy amin'ny fitadiavana ny teny fanalahidy mahomby indrindra hokendrena, manome soso-kevitra hanatsarana ny lohatenin'ny tranokala sy meta tag, ary manara-maso ny filaharana rehefa mandeha ny fotoana. Manana endri-javatra maromaro hafa afaka manampy amin'ny fanatsarana ny SEO an'ny marika izy io, ao anatin'izany ny fitaovana fananganana rohy, fitaovana fanaraha-maso tranokala, ary fitaovana famakafakana fifaninanana.
Atombohy ny fitsapana Moz Pro anao
Natosiky ny AI Photo Editing
Luminar AI dia mpanonta sary izay mampiasa AI hanatsorana ny fanovana sary ary hahatonga azy ho azon'ny vao manomboka na mpaka sary mitady hanova haingana amin'ny ambaratonga. Izy io dia manolotra ny mpampiasa ny fahafahana mamorona sary mitovy amin'ny Photoshop amin'ny tsindry vitsivitsy monja amin'ny alàlan'ny famakiana ho azy ny sary sy ny famantarana ny lafiny samihafa amin'izany, ao anatin'izany ny fiaviana, ny endri-tarehy, ny akanjo, ary ny maro hafa.
Luminar dia manome fahafahana ho an'ireo tsy manam-pahaizana amin'ny Photoshop hamorona votoaty miavaka izay mety hahazo firotsahana sy fiovam-po kokoa. Amin'ny tsindry vitsy monja dia afaka manitsy ny lafin'ny sary iray isika, ny hoditra malama, ny maso mamiratra, ary ny asa hafa izay mitaky fanitsiana mandritra ny ora maro.
llija Sekulov, Digital Marketing & SEO ao amin'ny Mailbutler
Jereo ny Luminar AI
Ny hoavin'ny AI amin'ny Marketing
Ny fitaovana AI dia afaka manatsara ny ezaka ara-barotra amin'ny alàlan'ny famelana ny mpivarotra hanatsara ny fahombiazany, hampitombo ny fahitana, hampitombo ny fiovam-po, sy ny maro hafa! Vetivety dia lasa ampahany amin'ny ezaka ara-barotra ataontsika andavanandro izy ireo ary mety hiitatra amin'ny asa maro vitantsika rehefa mampitombo marika. Amin'ny alàlan'ny fampiasana AI hanatsara ny fampielezan-kevitsika, dia afaka manao automatique ny asa isika, manamboatra ny varotra ary amin'ny farany dia mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa, haingana kokoa!
Tags: aiai fitaovanaAmra sy Elmafahaizana artifisialyfitaovana faharanitan-tsaina artifisialyberina karicchris zacherfamoronana votoaty aiContent Marketingmarketing votoaty aiEdgarfanovana aiimaimarketing marketinginfluencer marketing aiintergrowthleadiqllija Sekulovluminar aimailbutlermeetgarmoz pronlpsary aisary fanovanaPhotoshopquillbotReynald Fasciauxoptimization motera fikarohana aiseo aihaino aman-jery sosialymedia sosialy aiStudocumasoivoho marketing influencer ambony